Showing posts sorted by relevance for query သစ်ထူးလွင်. Sort by date Show all posts
7/05/2014 01:31:00 PM Myanmar-news
2/04/2014 02:24:00 PM crime-news
7/04/2014 11:12:00 AM Myanmar-news
6/06/2014 04:40:00 PM Myanmar-news
UNITY ဂျာနယ်က ၅ ဦး ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ကိစ္စ အစိုးရ အခုလို ထုတ်ပြန် (ရုပ်/သံ)
2/06/2014 12:40:00 PM Myanmar-news
2/06/2014 09:50:00 AM Myanmar-news
ဦးခင်ညွှန်နဲ့အဓိပတိ သတင်းဂျာနယ်အင်တာဗျူးပါ အခုတလော (facebook)ပေါ်မှာ ဝေဖန်တာ အကောင်းပြောတာ အဆိုးပြောတာ အမြင်အမျိုးမျိုး ထွက်နေတဲ့ ဗွီဒီယို ဖိုင်လေးမို့ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။\_
12/30/2013 04:35:00 PM Myanmar-news
12/20/2013 09:00:00 PM articles
12/04/2013 08:49:00 AM Myanmar-news
လက်ရှိတရုတ် အစိုးရကို ဦးသန်းရွှေ ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ခြင်း
11/26/2013 11:20:00 AM political-news
တော်တော်သောက်သုံးမကျတဲ့ ရှီကျင်းပင် ပဲ ၊ ဖအေကို ဖအေလို့ မမြင်တဲ့ အကောင်ပဲ ၊ ဒီနေ့ ဒီအကောင် ဒီလိုနေရာရအောင် ကျန်ဇီမင်း နဲ့ လီပင်းတို့ ဘယ်လောက် အနစ်နာခံခဲ့ရသလဲ ၊
အခု စပိန်တရားရုံးက ကျန်ဇီမင်း လီပင်းနဲ့ နောက်ထပ် ၃ ယောက်ကို ဖမ်းဖို့အမိန့်ချလိုက်ပြီ . . ဒါကို ပြတ်ပြတ်သားသား တုန့်ပြန်ရမှာ . . ဒီကောင် ရှီကျင်းပင်တော့ ကွာ . . အေးတိအေးစက်နဲ့ . . ဟိုမှာ ဟူကျင်တောင် နဲ့ ဝမ်ကြားပေါင်တို့ကိုပါ ဖမ်းခိုင်းတော့မှာ
. . ဒီကောင် ရှီကျင်းပင်ကတော့ မွေးရကျိုးမနပ်တဲ့ အကောင်ပဲ . . .
လုပ်ရမှာက စပိန်တရားရုံးက ဒီလိုအမိန့်ချမှတ်လိုက်တာဟာ တရုတ်ပြည်ကြီး တစ်ခုလုံးနဲ့ သန်းသုံးထောင်ကျော်ရှိတဲ့ တရုတ်လူထု ရှည်လျှားလှတဲ့ တရုတ်သမိုင်းကြောင်းကြီးကို ထိခိုက်စော်ကားလိုက်တာ ဖြစ်တယ် ၊ ဒီလုပ်ရပ်ကို ကျူးကျော်ရန်စမှု အဖြစ်
သတ်မှတ်တယ် ၊ ၂၄ နာရီအတွင် စပိန်တရားရုံးက ဒီအမိန့်ကို ပြန်ရုတ်သိမ်းရမယ် တရုတ်ပြည်ကြီးကို တရားဝင် အနူးအညွတ်တောင်းပန်ရမယ် နောက်ပြီး အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချလိုက်တဲ့ တရားသူကြီးကို ဖမ်းဆီးထောင်ချပစ်ရမယ် . . အဲဒီလိုမှ မလုပ်ရင် စပိန်နဲ့
သံတမန် အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်မယ် . . ဒီလုပ်ရပ်ဟာ စပိန်က တရုတ်ကို စစ်ကြေငြာလိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်မယ် . . ဒါမျီုးတွေလုပ်ရမှာကွား . . ခုတော့ ရှီကျင်းပင်က ငပျော့ကြီး ဖြစ်နေပါလား . .
ဟာ . . ရှီကျင်းပင်က လူလည်ပဲကွ . . လုပ်သင့်တာတော့ မလုပ်ဘူး . . ဟို ငါပိုင်သူပိုင်ငြင်းနေတဲ့ ကျွန်းစုတွေ မှာတော့ ကန့်သတ်ချက်အသစ်ထုတ်လိုက်တယ်တဲ့ . . ဟာ . . ဒီကောင်တော့ လူလည်ကျပြီ . . ကိုယ့်ကျေးဖူးရှင်တွေကို ကာကွယ်ရမယ့် အစား
ဘာမဟုတ်တဲ့ အရေးအကြောင်းလေးကို အကြောင်းပြပြီး လူထုအာရုံစိုက်မှုကို လမ်းလွှဲလိုက်တယ် . . ဟာကွာ . . ဒါဒီကောင် သတ်သတ်လုပ်တာ . . ဒီအချိန်မှာ ဒါလုပ်တာဟာ ဒီကောင် သတ်သတ် နာမည်ကြိးအောင် လူလည်ဝင်လုပ်တာပဲ . . ရှီကျင်းပင်ဟာ
လူလည်ပဲ ကွ . . ဒိကောင့် ကို ချက်ချင်း အစားလဲ ပစ်လိုက်ရမှာကွာ . . အစောကတည်းက ဒီလိုနေရာမျိုးကို သေဆိုသေရှင်ဆိုရှင် ချဆိုချ သတ်ဆိုသတ် လူနိုင်တွေကို ပဲ ရွေးခန့်ရမှာ . . ဒီပုံအတိုင်းဆို ကျန်ဇီမင်း တို့ လီပင်းတို့ ဟူကျင်တောင်တို့ ဝမ်ကြေားပေါင်
တို့တော့ သွားပါပြီကွာ . . ကံမကောင်းရင် တစ်သက်လုံး မသေမချင်း အချုပ်ထဲနေရတော့မှာ . . ဒီကောင်တွေကလည်း အ ပါ့ ကွာ . .
အခန်းထဲမှာ မြင်ကွင်းကျယ်ကွန်ပြူတာစခင်ရင်ကို ကြည့်ရင်း ဦးသန်းရွှေ တစ်ယောက် မချိတင်ကဲ စကားများ ရေရွတ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည် ၊ သက်ပြင်းများလည်း ခဏခဏချနေသည် ၊ အခန်းက ပါကေးအထူးခင်း ဝေါပေပေါများ ကပ်ထားပြီး အဲယားကွန်းအပြည့်
လွှတ်ထားပေမယ့် ဦးသန်းရွှေ တစ်ယောက် ချွေးများဖြင့် ရွှဲနစ်နေသည် ၊ ဇောချွေးများကြောင့်ဖြစ်မည် ၊ ကွန်ပြူတာစကရင် မြင်ကွင်းကျယ်တွင် ပေါ်နေသည်က သစ်ထူးလွင် ဆိုက်မှ စာမျက်နှာအချို့ဖြစ်သည် ၊ မရှုမလှ သေဆုံးနေသော အာဏာရှင်ဟောင်း ကဒါဖီ ၏
ရုပ်ပုံကိုလည်း သစ်ထူးလွင်ဆိုက် ဝင်းဒိုး၏ နောက်ကွယ်တွင် ဖွင့်ထားသဖြင့် တစ်ဝက်တစ်ပျက် တွေ့နေရသည် ၊
ဥိးသန်းရွှေ တစ်ယောက် အခန်းကျယ်ကြီးထဲတွင် ဟိုဟိုဒီဒီ ကျီးကန်းတောင်းမှောက် လျှောက်ကြည့်ကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလုံဖြစ်နေသည်ဟုထင်သည် ၊
စပိန်တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်း ဦးသန်းရွှေ အတွက် စိုးရိမ်စရာ . . ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က ဦးသန်းရွှေအတွက် ကမ္ဘာပျက်သလို့ . . တကယ်တော့ ဦးသန်းရွှေ တစ်ယောက် သူလုပ်ခဲ့သော အကုသိုလ်များ အကျိူးပေးတော့မှာကို ကြောက်နေပြီဖြစ်သည် . .
11/24/2013 04:22:00 PM Myanmar-news
11/22/2013 10:20:00 AM Myanmar-news
11/18/2013 12:59:00 PM Myanmar-news
၁၅ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၃။
မြန်မာနိုင်ငံ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသည့် အရူနာချာ ပရာဒေ့ရှ် ပြည်နယ် နယ်စပ်တစ်လျှောက်ဖြစ်သော ပန်ဆောင်တောင်ကြားလမ်း (Pangsau Pass) နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကို မကြာမီ ဖွင့်လှစ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး နန်ဆီးပါးက ပြောဆိုသည်။
ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းသစ် ပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာခြင်း အားဖြင့် မြန်မာ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ ကုန်သွယ်မှု ပိုမိုဖြစ်ထွန်း လာမည်ဖြစ်၍ အာဆီယံ- အိန္ဒိယ နိုင်ငံများ အကြား ဆက်သွယ်ရေးကို ထူထောင်မည့် ထူခြားသော ခြေလှမ်း တခုလည်း ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ပြောသည်ပာု အိန္ဒိယ Itanagar သတင်းဌာနက
အဆိုပါ လမ်းကြောင်းသစ်များ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် အတွက် အိန္ဒိယဘက်က နယ်စပ်မှ တနိုင်းမြို့အထိ ကားလမ်းကျဉ်း တိုးချဲ့ရေး နှင့်ပြုပြင်ဖောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း ပြီးစီးပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နယ်စပ် ၀မ်တိန်မှ မိုင်းယု၊ နမ့်ခမ်း၊ ဗန်းမော်၊ မြစ်ကြီးနား၊ တနိုင်း လမ်းပိုင်းကို လည်း တရုတ်ဖက်မှာ တာဝန်ယူ ပြုပြင်ဖောက်လုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာ- အိန္ဒိယ နယ်စပ်တစ်လျှောက်ဖြစ်သော ပန်ဆောင်တော် ဖြတ်ဝင်လာမည့် မိုင်ပေါင်း ၁၀၇၉ မိုင်ရှည်တဲ့ လမ်းမကြီးသည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဖောက်လုပ်ခဲ့သော လီဒိုလမ်းမကြီး (Stilwell Road) ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရူနာချာ ပရာဒေ့ရှ်(Arunachal Pradesh) ပြည်နယ် လီဒိုမြို့၌ စတင်ပြီး
မြန်မာနိုင်ငံကို ဖြတ်သန်းကာ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့တွင် အဆုံးသတ်သည့် သမိုင်းဝင်လမ်းမကြီး ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အဆိုပါ လီဒိုလမ်းမကြီးကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် မြန်မာအစိုးရကလည်း သဘောတူလိုက်သည်ပာု အိန္ဒိယအခြေစိုက် သတင်းဌာန ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ယခု ပန်ဆောင်ပတ်ဒေသမှာ ကုန်သွယ် ရေးလမ်းကြောင်းသစ် ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ရခြင်းသည် မြန်မာ- အိန္ဒိယ အစိုးရတို့ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် နယ်စပ်တစ်လျှောက်တွင် နယ်စပ်ဈေး ကိုးခုဖွင့်လှစ်ရန် အစီအစဉ်၏
၂၀၁၅ တွင် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏကို ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံအထိ ရောက်ရှိရန် အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာတို့က ရည်မှန်း ထားကြောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ- အိန္ဒိယ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံရောက်ရှိရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံက ရည်မှန်းထားကြောင်း နှစ်နိုင်ငံ ဆွေးနွေးချက်အရ သိရသည်။
(သတင်း- CL ထန်းငါ)
by သစ်ထူးလွင် သတင်း
10/30/2013 10:15:00 AM Myanmar-news
10/24/2013 06:37:00 PM Myanmar-news